Android wuxuu ka fakaraa qof walba, xitaa odayaashayada. | Androidsis
Android wuxuu ka fakaraa qof walba, xitaa odayaashayada.
Zack | | Codsiyada Android, Noticias
Android wuxuu iskudayaa inuu sahlanaado isticmaalkiisa oo ay heli karaan dhamaan dadweynaha, waana sababtaas Android sidoo kale waxay ka fikirtaa dadka naafada ah ama dadka araga ka liita (odayaal ahaan).
Maanta waxaan soo bandhigayaa codsi iyo xeelad si ay dadkaas masaakiinta ah ee aragoodu u dhib qabo (xitaa aniga iyo myyoopia) ay ugu raaxaystaan ​​Nidaamkan Operating-ka weyn.
Kordhi cabirka font ee Android-kaaga
Waana tan ilaa ay i weydiisteen sida loo samayn karo, taas kama aanan garan Raadiyaha taxanaha ah lama imaado ikhtiyaar kasta oo lagu kordhiyo cabbirka noocyada.
Laakiin ha ka welwelin, tan iyo tan waxaan u leenahay qaybo dayactir ah.
Barnaamijkan asal ahaan waxa ay qabato ayaa ku daraya xulashooyin horumarsan goobaha astaamaha taleefanka midkoodna waa awoodda lagu kordhin karo cabbirka xarfaha (laakiin wax badan: O).
Runtii kani waa launcher, laakiin Waxaa si gaar ah loogu talagalay in la fududeeyo isticmaalka carruurta iyo waayeelka.
Astaamaha ugu horreeya ee Bilowga Weyn waa inuu si dhammaystiran ula qabsado taleefanka. Tani waa inaan arki karno SMS-ka, wici karno, arki karno sawirrada, iwm.
Iskuxirka garaafku waa mid aad u fudud, 6 badhan oo waaweyn, waqtiga iyo taariikhda meesha ugu sareysa aad u weyn. Badhamada aasaasiga ah waa kuwa Wicitaanka, SMS, kamarada, sawirada, SOS iyo bilaabida inta ka hartay codsiyada. Badhanadan waa lakala habeyn karaa.
Laakiin kaliya maahan inay balaariso xarfaha, waxaa sidoo kale kujira badhan SOS, taas oo ay dhacdo xaalad degdeg ah, isticmaalaha taleefanka ayaa riixi kara badhankaas taleefankuna si otomaatig ah ayuu u soo wici doonaa ama u diri doonaa SMS degdeg ah.
Nota: Maqaalkani wuxuu ka yimid shaqaale ila shaqeeya oo i weydiinaya sida loo ballaariyo ilaha laga helo Android, maaddaama uu doonayey inuu u iibsado aaladda loo yaqaan 'Android Tablet' aabihiis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Android wuxuu ka fakaraa qof walba, xitaa odayaashayada.
Vincent del Saz dijo
Hagaag, waa la mahadiyey, maadaama aan uruurinayo barnaamijyo nuucaan ah oo loogu talo galay dadka aragga dhibaato ka qaba, taas oo ah, dadka aragga aad u yaraaday (tusaale ahaan, 6% araga oo kaliya) oo waxaan horeyba uhelay qaar kufudud iyo mid waxyaabaha ay dadkaani iweydiiyeen ayaa ah hadii font la weyneeyo iyo wax kale oo aanan heli karin waa utility kaa dhigaya inaad ku dhaweyso meelkasta oo shaashada ah.
Jawaab Vicente del Saz
hello: Waan ka helay nuxurka barnaamijkan, sidoo kale waan u baahanahay, waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago
isticmaalayaasha kale isla markaana baro fursado badan.
Ku jawaab Hela2o
Waxaan heystaa mootorola android waxaanan soo degsadaa qalabka dayactirka + maxaa yeelay ma arki karo lambarrada iyo xarfaha shaashadda. Waan maareeyaa inaan font ku qoro waxyaabo dheeri ah, laakiin markaan gurigeyga aado waxay ku noqotaa xuruufta caadiga ah, miyay iga maqnaan kartaa tallaabo aan ku badbaadin karo cabirka?
Jawaab Ana Gualdoni
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca, wax weyn ayey ka dhigeysaa, laakiin markaad ku noqoto gurigaaga, waa caadi! sidee u yeelnaa?
Ku jawaab Jologuzman
Barnaamijku wuxuu i siiyay natiijooyin aad u wanaagsan, laakiin cabirka farta ee la xushay markaan furayo taleefanka gacanta ayaa dib loo habeeyay, isagoo ku soo noqonaya cabirkii asalka ahaa markii aan xiro habeenkii. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aad u sameyn karto si taasi aysan u dhicin. Haddii aad sidoo kale si naxariis leh iiga jawaabi laheyd, emailkeygu waa jorgemarsili@fibertel.com.ar
Miyaad kugula talinaysaa nooc moobiil gaar ah oo taleefanka gacanta ah ah inuu awood u yeesho inuu qaybiyo cabirka xarfaha waaweyn? Qaar ka mid ah noocyada iyo moodeelka taleefanka gacantu aanu aad u weyneyn. Waad mahadsantahay ilaa hada!
Waxaan isticmaalaa QAYBTA FONT
hello, taleefankayga gacanta kaliya lambarrada xiriir ee aad u yar ayaa ka muuqda haddii aan kala saari karo in kasta oo mararka qaarkood ay igu adag tahay aniga, iyo kororka guud ee fontku wuu i dhibaa, ma jirto hab lagu saamayn karo oo keliya qayb ka mid ah qaabeynta, «xiriirada» ?
Ku jawaab oztreme
Laakiin sidee loo sameeyaa si loo qoro far waaweyn?
Ku jawaab clarita
Waxaan ku tijaabinay ZTE Skate oo leh shaashad 4,3-inji ah